Kaamirada TrueDepth waxay daahineysaa soo saarida iPhone X | Wararka IPhone
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee iPhone X waa hortiisa oo leh shaashad ballaaran iyo midka loo yaqaan jasiirad kaas oo ku yaal kamaradda TrueDepth iyo dhammaan dareemayaasha u oggolaanaya furitaanka terminalka iyada oo loo marayo Face ID. IPhone X waa la keydin karaa marka xigta 27 bisha Oktoobar iibkuna si rasmi ah ayuu u bilaabanayaa 3-ka Nofeembar.
Taariikhahaani waa taariikhaha rasmiga ah laakiin waa la ogyahay taas tirada iPhone X ayaa ka yar Apple inta ay aaminsan tahay inay heysan karto waqtigan. Warbixinadii ugu dambeeyay iyo xogaha soo baxaya waxay muujinayaan in kamarada TrueDepth ay sababayaan iphone aad u tiro yar in la soo ururiyo intii la filayay.
Ma mudan tahay in la sugo?: Kaamiradda TrueDepth ayaa daahisa wax soo saarka iPhone X
Kaamirada TrueDepth waa iskudhafka nidaamyada ay iPhone X ku leedahay jasiirad Kuwaas oo aan ku qaban karno seddex hawlood oo muhiim ah: furitaanka terminal-ka Face ID, sawirro qaali ah ka qaadno oo u dir Animojis. Kaamiradani waxay leedahay dhowr nidaam:
Dareenka u dhowaanta
Aaladda iftiinka ambient
7 megapixel kamarad
Sida laga soo xigtay macluumaadka ugu dambeeyay ee ka imanaya dhowr warshadood oo wax soo saarka iPhone X, kakooban ee Kaamirada TrueDepth waxay daahineysaa soosaarka ballaaran ee qalabka. Dib u dhaca noocan oo kale ah ayaa ah in bishii Sebtember la qiyaaso inay jiri doonaan 45 milyan oo unug oo ah iPhone X marka la bilaabayo. Haatan tirada qalabka ayaa lagu qiimeeyaa 36 million. Ku dhowaad 10 milyan oo cutub oo kala duwan.
Wax soosaarka ayaa lafilayaa inuu soo fiicnaado dhawr bilood kadib markii qaybo badan laga helay alaab-qeybiyeyaal kala duwan si loo kordhiyo wax soo saarka loona hor mariyo shixnadaha aaladaha keydsan
Kakanaanta ay ka dhigan tahay in soosaarka iyo isku imaatinka tignoolajiyada kaladuwan ay madax xanuun ku tahay Apple oo arki doonta burburka keydka iyo adeegsadayaasha. waa inay sugaan toddobaadyo iyo xitaa bilo si ay u helaan iPhone X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kaamirada TrueDepth ayaa sabab u ah dib u dhaca soo saarista iPhone X